I-Federal Title I Programme iSebenzisa abafundi kunye nezikolo
Yintoni iCandelo I?
Isihloko ndibonelela ngemali ye-federal kwizikolo ezikhonza indawo eneentlupheko eziphezulu. Inkxaso-mali ijoliswe ekuncedeni abafundi abasemngciphekweni wokuwa emva kwezemfundo. Inkxaso-mali inikeza umyalelo ongezelelweyo kubafundi abahluphekileyo okanye abasengozini yokungakwazi ukuhlangabezana nemigangatho karhulumente. Abafundi kulindeleke ukuba babonise ukukhula ngokwezifundo ngezinga elikhawulezayo kunye nenkxaso yoqeqesho lweSihloko I.
Iprogram ye-Title I ivela njengeSihloko I soMthetho oQala kunye noPhezulu ka-1965. Ngoku idibene neSihloko I, Ingxenye A ye-No Child Left Behind Act ka-2001 (NCLB). Injongo yaso yayikukuqinisekisa ukuba bonke abantwana banikezwa ithuba lokubonelelwa ngemfundo ephakamileyo.
Isihloko Ndiyinkqubo ephakamileyo yemfundo exhaswe ngemali kwizikolo zaseprayimari neziziisekondari. Isihloko Ndiye senzelwe ukugxila kwiimfuno ezizodwa kunye nokunciphisa ikhefu phakathi kwabafundi abahlelelekileyo nabahlelelekileyo.
Isihloko ndizuze izikolo ngeendlela ezininzi. Mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo yimali ngokwayo. Imfundo kawonkewonke iyimali ekhishwe kwaye i-I-I yemali efumanekayo inikeza izikolo ithuba lokugcina okanye ukuqalisa iinkqubo ezijolise abafundi abathile. Ngaphandle kwesi sikhwama, izikolo ezininzi aziyi kuba nako ukubonelela abafundi babo ngeenkonzo. Ngaphezu koko, abafundi baye bavuna izibonelelo zeSihloko Iimali ezinamathuba abaza kuba nazo.
Ngamafutshane, Isihloko I sincede abanye abafundi baphumelele xa bengenalo.
Ezinye izikolo zikhethwa ukusebenzisa iimali zokuqalisa isiGaba sesiTyalo seNkqubo apho wonke umfundi angazuza kule nkonzo. Izikolo mazibe nezinga lokunciphisa ubumpofu obuncinane bama-40% ukuqhuba isiCwangciso seNhloko yeSikolo.
Inkqubo yesiHlomelo yeSikolo i-ISI inokubonelela ngezibonelelo kubo bonke abafundi kwaye ayigcinwanga kuphela kulaba bafundi ababhekwa njengezoqoqosho. Le ndlela inika izikolo i-bang enkulu kwi-buck yabo kuba banako ukuchaphazela inani elikhulu labafundi.
Izikolo ezisebenzisa isiGaba se-I ineemfuno eziliqela zokugcina imali. Ezinye zezi mfuno zilandelayo:
Izikolo kufuneka zenze uvavanyo olubanzi lweemfuno ezichaza isizathu sokuba iImali ifunekayo kunye nendlela izakusetyenziswa ngayo.
Izikolo mazizisebenzise ootitshala abaqeqeshekileyo kakhulu ukubonelela ngemfundo.
Ootitshala kufuneka basebenzise izicwangciso zokufundisa ezisisiseko, ezijoliswe kuphando.
Izikolo mazibonelele ootitshala bazo ngefuthe lophuhliso lobugcisa olujoliswe ekuphuculeni imimandla echazwe ziimfuno zovavanyo.
Izikolo kufuneka zenze isicwangciso sokubandakanya kwabazali ngokujoliswe kwimisebenzi enxulumene nobusuku bokubandakanya intsapho.
Izikolo kufuneka zichonge abafundi abangaboniswanga kwimigangatho karhulumente kwaye benze isicwangciso socwangciso ekuncediseni abo bafundi ukuba bakhule kwaye baphucule.
Izikolo mazibonise ukukhula konyaka kunye nokuphuculwa. Kufuneka baqinisekise ukuba oko benzayo kusebenzayo.
I-Sagittarius Ngo-Aquarius: Uthando lwabo luhambelana
Iingcebiso ezilungileyo kakhulu zokuzalwa
I-Neutron Inkcazo kwiKhemistry